Umzobi uguqula imizobo yabantwana bakhe ibe yimizobo yedijithali | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UPablo Gondar | | Abadlali
Umzobi uguqula imizobo yabantwana bakhe ibe yimizobo yedijithali ukufumana iziphumo ngaphezulu iyamangalisa igcwele Ingcinga yomntwana zezakho, iprojekthi enomtsalane, eyahlukileyo enomnxeba womlingo oya kusenza sibe ngabantu abangalunganga khumbula imizobo yethu ukususela oko sasingabantwana, Ingenzeka njani imizobo yabantwana bakho ukuba ubusenza okufanayo?
Yethu sonke xa sasingabantwana senza imizobo yazo zonke iintlobo ezahlukileyo kunesiqhelo kwaye ngaphandle koloyiko, enkosi kule mizobo yethu yayiyeyodwa kwaye iyile kakhulu. Inkqubo ye- bantwana banenye amandla awodwa okubona umhlaba ngendlela eyahlukileyo, yiyo loo nto imizobo esayenzayo sisengabantwana yayingengobubi kwaphela kodwa yayiyimisebenzi yobugcisa eyiyo. bucala ngasekhohlo Umzobi waseDatshi wabuguqula ubugcisa babantwana bakhe bakudala baba bubugcisa bobuchwephesha ukusuka kwikamva. Iprojekthi enomdla kakhulu kunye nomculi okhethekileyo.
Umzobi waseDatshi uTelmo Pieper Uzalelwe kwi-1989 wenza iprojekthi enomdla egxile kwi ulonwabo lwemizobo yabantwana, Ndigqithisela kwimizobo endiyenzileyo ndisengumntwana. Ngale ndlela intsha yokubona izinto, iTelmo iphinde yaphinda loo mizobo ngemifanekiso eyiyo ebonisa konke ubumsulwa obufana nomntwana budityaniswe nobuchule bobugcisa iminyaka yokusebenza kunye nomzamo.
Siyayibona indlela UTelmo wajika umzobo wakhe olula waba ngumzekeliso wedijithali omangalisayo. Kuyathakazelisa ukubona yomibini imizobo kwaye uqaphele ukuba kanjani umbono wehlabathi uyatshintsha xa singabantwana, Kula maxesha sizikhawulela ekumeleni yonke into ngendlela engaqondakaliyo nelula, le yinto entsonkothileyo xa sibadala kuba sihlala sithanda ukubonisa yonke into ngendlela egqityiweyo kwaye inzima.
Umsebenzi wakhe akajonganga kuphela ekubuyiseni aba bantwana kodwa nakwi ikhathalogu yonke yeeprojekthi ezibonisa umdla ezizele ziingcinga. Kwi iphepha lomntu singazifumana zonke iiprojekthi zakho ngocwangco.
Omnye umsebenzi onomdla kakhulu yile mculi zezabo graffiti enkulu into ayenzayo kwifayile ye- projekthi I-Telmo Honey, imizobo emikhulu eqaqambileyo engaphambili kwizakhiwo ikwazile ukubonisa imifanekiso ebukekayo nenomtsalane kakhulu. UTelmo Pieper ngumzobi ofanelwe ukuba abe kwikhathalogu yethu yesalathiso sobuchule.
Unokulandela eli gcisa kwiinethiwekhi zonxibelelwano:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Umzobi uguqula imizobo yabantwana bakhe ibe yimizobo yedijithali
Amakhadi eshishini ayilayo kunye nalahlukileyo kwinkampani yakho